50 Vhesi dzeBhaibheri pamusoro pehupenyu | MINYENGETERO MARI
musha Mavhesi eBhaibheri 50 Vhesi dzeBhaibheri pamusoro pehupenyu
Heano makumi mashanu emavhesi emavhesi nezvehupenyu. Izvi Bhaibheri mavhesi anochinja maitiro aunotarisa hupenyu. Kana isu tava kusvika kuhupenyu kubva kuna Mwari maonero, tinoita mhedzisiro. Mwari anoda kuti timushumire tichidanana sezvo Iye akatida, kuda vanhu zvisingaite ndiyo nzira yakanakisa yekurarama hupenyu hwako. Rudo ndiwo murairo mukurusa nekuti rudo ruri kurarama. Verenga aya mavhesi ebhaibheri nemoyo wako wese nhasi uye ita kuti rudo rwa Kristu ruchinje hupenyu hwako.
1. Mapisarema 121: 7-8:
2 VaEfeso 5: 15-16:
15 Naizvozvo muone kuti munofamba musingafungi semapenzi, asi sevakangwara, muchidzikunura nguva, nekuti mazuva akaipa.
3. Vakorose 3: 23-24:
23 Uye chero chipi chamunoita, chiitei nomoyo wose, saIshe, kwete kuvanhu; 24 muchiziva kuti muna She muchagamuchira mubairo wenhaka, nekuti munoshandira Ishe Kristu.
21 Anotevera kururama netsitsi, anowana hupenyu, Kururama, nokukudzwa.
Nekuti zvinobatsirei munhu, kana akawana nyika yose, akarashikirwa nemweya wake?
6. 2 Vakorinde 5: 7:
19 Sezvinoita mvura kumeso inotarisana nechiso, saiwo moyo wemunhu kumunhu.
8. Mapisarema 73:26:
Nyama yangu nomoyo wangu zvinopera; asi Mwari ndiye simba remoyo wangu, nomugove wangu nokusingaperi.
9. 1 Petro 3: 10-11:
10 Nekuti iye unoda upenyu, nekuona mazuva akanaka, ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake kuti arege kutaura zvinonyengera. 11 Ngaarambe zvakaipa, aite zvakanaka; ngaatsvake rugare, uye auye nazvo.
10. Mapisarema 31:3:
3 nekuti ndimi dombo rangu nenhare yangu; Naizvozvo, nekuda kwezita renyu, nditungamirirei, mundifambise.
11. Mapisarema 25:4:
4 Iye une maoko akachena, uye moyo wakanaka. Iye asina kusimudzira mweya wake pane zvisina pake, kana kupika zvinonyengera.
23 Chengeta moyo wako nekushingaira kose; nekuti mukati mawo ndimo mune mararamiro.
13. VaRoma 12: 2:
2 Uye musazvifananidzwa nenyika ino; asi imwi mushandurwe nokuvandudzwa kwepfungwa dzenyu, kuti murege kuratidza chii kuti zvakanaka, uye kunogamuchirika, uye kwakakwana, vachaparidza naMwari.
14. Mapisarema 37:7:
7 Zorora kwazvo muna She, mumurindire unyerere, usazvidemba nekuda kwaiye unofambiswa panzira yake, nekuda kwemunhu unogadzira mano akaipa kuita.
15. Johane 6: 35:
35 Jesu ndokuti kwavari: Ini ndiri chingwa cheupenyu, unouya kwandiri, haangatongofa nenzara; neunotenda kwandiri haangatongovi nenyota.
3 Anobata muromo wake, anochengeta hupenyu hwake, Asi anoshamisa miromo yake, achaparadzwa.
17. Dheuteronomio 30:16:
16 nekuti ndinokuraira nhasi, kuti ude Jehovha Mwari wako, nokufamba munzira dzake, nokuchengeta mirairo yake, nezvaakatema, nezvaakatonga, kuti urarame uye muwande; nyika kwamunoenda, kuzoiita yenyu.
18. Mapisarema 23:6:
Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvinonditevera mazuva ese ehupenyu hwangu, uye ndinogara mumba maIshe nekusingaperi.
19. Muparidzi 3: 1:
Chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho, uye chimwe chinhu kune chimwe chinhu pasi peudenga.
20. Vaheberi 12: 14:
14 Tevera rugare nevanhu vese, uye nehutsvene, kunze kwahwo hakuna munhu uchaona Ishe:
21: Jakobho 3:13:
13 Ndiani munhu akachenjera uye anogara pakati pazvo nezivo? ngaaratidze kubva pane kukurukurirana kwakanaka mabasa ake neunyoro hweuchenjeri.
17 Iye ari panzira youpenyu, anochengeta kuraira, Asi anoramba kurairwa, anotsauka.
8 Unowana huchenjeri, unoda mweya wake, Unochengeta kunzwisisa, unowana zvakanaka.
24. VaGaratiya 2:20:
20 Ini ndakarovererwa pamwe naKristu: zvakadaro ndinorarama; zvakadaro handisi ini, asi Kristu unorarama mandiri. Uye hupenyu hwandinorarama zvino munyama, ndinorarama nekutenda kweMwanakomana waMwari, iye akandida akazvipa nekuda kwangu.
23. Johane 7: 38:
38 Unotenda kwandiri, rugwaro sezvarwakareva, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make.
24. Mateo 16:25:
Nekuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake, ucharashikirwa nahwo, uye ani nani unorashikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu uchahuwana.
25. Muparidzi 7: 10:
10 Usati, "Mazuva ekare anopfuura azvino nei?" nekuti iwe haubvunze nokungwara pamusoro pechinhu ichi.
26. Mapisarema 37: 5-6:
5 Isa nzira yako kuna Ishe; vimba naye zvakare; uye achazviita. 6 Iye achavigira kururama kwako sechiedza, Nokururamisirwa kwako samasikati.
27. Mateo 6:34:
Naizvozvo musafunganyira mangwana, nekuti mangwana achazvifunganyira zvinhu zvawo. Zuva rakaringana nezvakaipa zvaro.
28. 1 Johane 4: 9:
9 Naizvozvi rudo rwaMwari rwakaratidzwa kwatiri, nekuti Mwari wakatumira Mwanakomana wake wakaberekwa mumwechete munyika, kuti tirarame kubudikidza naye.
29. 1 Timotio 4:12:
12 Ngakurege kuva nemunhu unozvidza uduku hwako; asi uve muenzaniso wevatendi, mushoko, mukutaura, murudo, mumweya, mukutenda, mukuchena.
30. VaFiripi 2: 14-16:
Naizvozvo, vadikamwa vangu, sezvamakagara muchiteerera, kwete mukuna kwangu chete, asi kunyanya pakusipo kwangu, shanda runyararo rwenyu nekutya uye nekubvunda. 12 Nekuti ndiMwari unoshanda mamuri, zvose kuda nekuita zvinomufadza. 13 Ita zvinhu zvese pasina kugunun'una uye kupokana: 14 kuti muve vasina chavanopomerwa uye vasina mhosva, ivo vana vaMwari, musina kutsiurwa, mukati merudzi rwakakombama uye rwakatsauka, vamunopenya pakati pavo semwenje munyika; Kubata shoko reupenyu; kuti ndifare nezuva raKristu, kuti handina kumhanya pasina, kana kushandira pasina.
31. 1 Vakorinde 15: 22:
22 Nekuti senge munaAdam vese vanofa, saizvozvowo muna Kristu vese vachararamiswa.
32. Mapisarema 118:24:
33. Mateo 6:25:
25 Naizvozvo ndinoti kwauri: Musafunganya pamusoro peupenyu hwenyu, kuti muchadyei kana chii chandich kumwa; uye kwete muviri wako, izvo zvauchapfeka. Hupenyu hahwuri hwakawanda kupfuura nyama, nemuviri zvipfeko here?
9 moyo unonyengera kupfuura zvinhu zvose, wakaipa kwazvo, ndiani angauziva? Ini, iyeni, ndinonzvera moyo, ndinoidza itsvo, kuti ndipe mumwe nomumwe zvakafanira mufambiro wake, uye zvakafanira zvibereko zvamabasa ake.
35. Ruka 11:28:
28 Asi iye akati: Hongu, asi zvikuru vakaropafadzwa vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta.
36. 2 Timoti 3: 16-17:
Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari, uye rwunobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa, nekurayira mukururama, 16 kuti munhu waMwari ave akakwana, akagadzirirwa kwazvo mabasa ose akanaka.
37. VaGaratiya 5:25:
25 Kana isu tichirarama muMweya, ngatifambeiwo noMweya.
38. Johane 14: 6:
6 Jesu akati kwaari: Ini ndiri nzira, nechokwadi, neupenyu; hakuna unouya kuna Baba, asi nekwandiri.
39.Zvirevo 3: 1-2:
Mwanakomana wangu, usakanganwa mutemo wangu; Asi moyo wako ngauchengete mirairo yangu. 1 nekuti vachakuwedzera mazuva mazhinji, nohupenyu hurefu, nerugare. 2 Tsitsi nezvokwadi ngazvirege kukusiya; Zvinyore pahwendefa yemoyo wako.
40. Mateo 16:26:
Nekuti munhu unobatsirwei kana akawana nyika yose, akarashikirwa nemweya wake? Kana kuti munhu uchapei kuti chive muripo wemweya wake?
41. Mapisarema 16:11:
42. VaFiripi 1:21:
21 Nekuti kwandiri kurarama ndiKristu, uye kufa ifuma.
43. Jakobho 1:12:
Wakakomborerwa munhu unotsungirira pamuedzo; nekuti kana anzverwa, uchagamuchira korona yeupenyu, iyo yakavimbiswa naIshe kuna vanomuda.
44. 1 Johane 4: 15:
15 Ani nani unobvuma kuti Jesu Mwanakomana waMwari, Mwari unogara maari, naiye muna Mwari.
50. VaRoma 14: 8:
8 Nekuti kana tichirarama, tinorarama kuna Ishe; uye kana tichifa, tinofa kuna She; kana tichirarama kana kufa, tiri vaIshe.
46. Mateo 5:14:
14 Imwi muri chiedza chenyika. Guta rakamiswa pamusoro pechikomo harigoni kuvanzwa.
47. 1 Vakorinde 6: 19-20:
19 Chii? Hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yeMweya Mutsvene uri mamuri, wamunawo uchibva kuna Mwari, uye hamusi wake? Nekuti makatengwa nemutengo; saka rumbidza Mwari mumuviri wako uye mumweya wako, uri waMwari.
9 Anofamba zvakarurama, anofamba zvakasimba; Asi anokanganisa nzira dzake, anozivikanwa.
49. Zvakazarurwa 3:19:
19 Vose vandinoda ini ndinotsiura nekuranga; saka shingairira, utendeuke.
50. Muparidzi 7:14:
14 Pazuva rekubudirira iwe fara, asi nezuva rekutambudzika fungisisa kuti, Mwari akaisawo imwe pamberi pemumwe, kuti munhu arege kuwana chinhu shure kwake.
Previous nyayaWepamusoro 10 Minyengetero Yevana Vedu Remangwana Wawakaroorana naye
inotevera30 Ndima dzeBhaibheri Nezve Simba
Mavhesi eBhaibheri Nezve Kushushikana
30 Minamato yenamato yemamiriro ezvinhu asingagone
Kunamatira Kuti Uchengetedze Hwakakundikana Ukama